Maxaa kala heysta maamul goboleedyada iyo dowladda Federaalka? - BBC News Somali
Maxaa kala heysta maamul goboleedyada iyo dowladda Federaalka?
Xigashada Sawirka, Madaxweynaha Jubbaland
"Waxa la iska wareystay waxa ugu badan waxay ahaayeen mashaariicdii 2018 wixii ka hirgalay, waxa aan qabsoomin ee sannadkan 2019 u dhacay iyo sababaha ay u qabsoomi waayeen, sababahaas ayaa jira, in la is waraystana ay muhiim u noqotay" ayuu yiri Cabdulqaadir.
Farmaajo: Soomaaliya waxay ka dagi la'dahay mucaarad wax dumiya iyo faragelin shisheeye
"Waxaa nahaysta farogalin shisheeye oo runtii muddooyinkii ay dawladnimadii naga burburtay ka dib in cidwalba ay isku daydo wixii ay ku heli karto saamayn, dhaqaale, ama dano kale in ay Soomaaliya farogashato, oo dadkeenu ay aamineen haddii beesha caalamku aysan garab taagnayn in aysan dhaqaaqi karin, taasna waxay keentay in dad badan ay is dhiibaan oo shisheeye la isu dhiibo." Ayuu intaas ku sii daray madaxweynuhu.
"Maamul goboleedyadu waxay rabaan in ay la kulmaan beesha caalamla, iyaguna wada shawraan, Soomaalida tusaan in iyaga iyo xukuumadda faderaal ah aysan isku fiicnayn," ayuu yiri Ibraahim Faarax Bursaliid oo ah bare Jaamacadeed oo aad ugu dhuun duleela arrimahan.
"Maamul goboleedyada sida ay wax u rabaan in ay u helaan macnaheedu ma aha in sida ugu habboon ay tahay, iyagana waxaa ku fiicnaan lahaa hal jamhuuriyad, hal hannaan dawladnimo iyo hal dhaqan siyaasadeed oo Soomaalidu ay wada leedahay,"
"Haddii ay noqoto in isbarbaryaac uu yimaaddo oo xukuumadda oo aan la marin calaaqaad toos ah lala furo waxay aflagaaddo ku tahay gobannimada iyo qarannimada." ayuu intaas ku sii daray Ibraahim Bursaliid.
"Shirarka Golaha Ammaanka Soomaaliya waa la soo lafo-gurijiray, waxaana la isla meel dhigi jiray waxyaabaha siyaasadda ah ee ay tahay in laga sii heshiiyo, markaas ka dib ayaana la shiri jiray" ayuu yiri Injineer Cabdulqaadir Aadan oo lataliye u ah madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug.
"Waddadii saxda ahayd unbaan la marin ee diidmo ma jirto". ayuu intaas ku sii daray Cabdulqaadir.
"Waxaa khasab ah in lawada fadhiisto, xukuumadda Faderaal ah ee uu gadhwadeenka ka yahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajana ay isku daydo in ay raadiso maamul goboleedyada, si walaaltinimo ahna ula hadasho, wixii ay tabanayaanna ay ka qanciyaan," ayuu yir Bursaliid.
"Maamulgoboleedyadana waxaa la gudboon in ay ka soo noqdaan hankoodan isbarbaryaaca ah, ayna ogaadaan oo qirtaan in ay tahay khalad istaraatiiji ah oo ay ka galayaan qaranka." Ayuu intaas ku sii daray.